महेश रिमाल नायव महाप्रबन्धक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान
महेश रिमाल विगत १२ वर्षदेखि राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा आबद्ध छन् । हाल उनी नायव महाप्रबन्धक भएर आएपछि संस्थानलाई बलियो जीवन बीमा कम्पनी बनाउने यात्रामा अघि बढेका छन् । प्रस्तुत छ, संस्थानको समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानले उनीसँग गरेको कुराकानीको सार :
५३औं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा संस्थानले गरेका मुख्य उपलब्धिहरू के के हुन् ?
म ६४ सालमा यस संस्थानमा आबद्ध भएको हुँ । त्यतिबेला संस्थानमा आव २०५८/६९ देखिका लेखापरीक्षण लगायत काम थाती थिए । तीसहित आजसम्म आव २०७३/७४ सम्मका लेखापरीक्षणको काम हामीले सकिसकेका छौं । पछिल्ला २ आवको लेखापरीक्षणको काम पनि जारी छ । त्यसबेला चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू आउने र केही समयमै छाडेर जाने गर्थे । त्यसैले सोचेअनुसार काम सम्पन्न हुन सक्दैन थिए । विगतमा संस्था प्रविधिमैत्री थिएन । ८ वर्षअघिदेखि हामी प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । गत साउन १ गते हामीले नयाँ सफ्टवेयर सार्वजनिक गर्‍यौं । साथै, यो आवभित्र २४ ओटा शाखा पुर्‍याउने लक्ष्य
लिएका छौं ।
लामो समयदेखि लेखा परीक्षण अस्तव्यस्त भयो । यस विषयमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
आव २०६८/६९ सम्मको वित्तीय विवरण बीमा समितिमा स्वीकृतिका लागि तयार छ । आव २०६९/७० देखि ७३/७४ सालसम्म लेखापरीक्षण भइसकको अवस्था छ । साथै, पछिल्ला २ आवको लेखापरीक्षणको काम पनि भइरहेको छ । बीमा समितिले वित्तीय विवरण चाँडै स्वीकृति गरिदियो भने भने हामी साधारणसभा गर्छाैं । ‘पेन्डिङ’मा रहेका सबै कामहरू चालू आवमै सकाउने लक्ष्य छ ।
लेखापरीक्षणमा ढिलाइ भए पनि संस्थानको वित्तीय परिसूचक चाहिँ कस्तो छ ?
समग्रमा हाम्रो वित्तीय परिसूचक राम्रो छ । लेखाका स्रेस्ताहरूले पहिले समयमै वित्तीय परिसूचक नराखिदिएर, समयमै भौचिङ नगरेर र कागजातहरूको व्यवस्थापन नहुँदा केही समस्या आएको थियो । त्यसलाई अहिले हामीले सुधार गर्दै आएका छौं । अहिलेको त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार हाम्रो बीमाशुल्क र नाफा रामो छ ।
संस्थानले हाल कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ र जोखिम कत्तिको छ ?
बीमा समितिले तय गरेको लगानीको मोडलअनुसार हामी लगानी गर्दै आएका छौं । त्यो निर्देशिकाभन्दा बाहिर गएर लगानी गर्न मिल्दैन । लगानीलाई विविधीकरण गराएपछि जोखिम कम हुन्छ । त्यसबाहेक सरकारले ल्याएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा पनि लगानी गरेका छौं । जलविद्युत् कम्पनीमा पनि हाम्रो शेयर छ । बैंकको ऋणपत्रमा पनि लगानी गरेका छौं । साथै, विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउने विषयमा हाम्रो छलफल भइरहेको छ । जोखिम लिन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ । हामी हाम्रो क्षमता वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाइरहेका छौं ।
संस्थानमा विभिन्न समयमा उतार चढाव देखिइरह्यो । किन ?
विगतमा हामीकहाँ ट्रेड युनियन धेरै थिए, अनुभव कम थियो । गणतन्त्र स्थापनापछि ट्रेड युनियनको गतिविधि पनि बढ्यो र कहिलेकाहीँ व्यवस्थापनामा पनि समस्या आइरह्यो । धेरै कामहरू चाहेर पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनौं । ट्रेड युनियन हुनुमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष थिए । केही कुरा व्यवस्थापनलाई अवरोध गर्ने खालका हुन्थे । अहिले त्यो स्थिति छैन, लोकसेवा पास गरेर आएका युवा जनशक्ति हामीसँग छ । अहिले कर्पोरेट क्षेत्रको संस्था जसरी नै हामी सक्रिय छौं, अब हामी निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं ।
केही संस्थामा ट्रेड युनियनको राजनीति हुने, व्यवस्थापनसँग असन्तुष्ट हुने गरेको पनि देखिन्छ । बीमा संस्थानको अवस्था कस्तो छ । कर्मचारीको माग के छ ?
अहिले कर्मचारीको त्यस्तो माग छैन । कर्मचारी नियमावलीमा धेरै कुराको व्यवस्था गरिसकेका छौं । माग गरिएका विषयलाई पनि व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याउने गरेका छौं । सबै कुरा नियमावलीमै व्यवस्था गर्छांै । सुविधाहरू पनि राम्रै छ । तलव भने सरकारको हातमा हुन्छ । त्यसबाहेक सुविधा बढाउने विषयमा हामी सकारात्मक छौं । वैदेशिक तालीम दिने, कार्यक्षेत्रमा पठाउने आदि सबै मानव संसाधन व्यवस्थापनअनुसार गरिएको छ । कानूनअनुसार सुविधाहरू दिइरहेका छौं । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यस संस्थानमा व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच राम्रो सम्बन्ध छ ।
निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न के कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ?
हामीसँग ५२ वर्षको अनुभव छ । अहिले आएको नयाँ कम्पनी पनि सक्षम छन । तर, हामीहरूसँग यस्ता कुराको अनुभव छ । हामीमा जोखिम लिन सक्ने क्षमता छ । ६ दशमलव ५ को बोनसदर लामो समयदेखि दिएका छौं । यो अझै कायम गरिरहेका छौं । अब त्यसलाई बढाउने प्रयासमा पनि छौं । तर बजारमा केही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । बीमा योजना नक्कल गर्ने, त्यही दोहोर्‍याउने जस्ता क्रियाकलाप भइरहेका छन् । बजार यसैमा रुमल्लिएको छ । सामान्य मानिस पनि बीमामा आउने गरी दायरा र पहुँच बढाउन आवश्यक छ । शाखा सेवा बढाउने तरीकाले हामी जानुपर्ने थियो । एउटा सीमित बजारमा एक किसिमको प्रतिस्पर्धा गर्दा त्यसका नकारात्मक असर आउँछन् ।
अभिकर्तातर्फ भन्ने हो भने निजी बीमा कम्पनीभन्दा हाम्रो ‘इन्सेन्टिभ’ कम छ । अभिकर्तालाई प्रायःजसो कम्पनीले दिने इन्सेन्टिभ हामीले दिएका छैनौं । व्यवस्थापन खर्च पनि निजी कम्पनीको भन्दा कम छ । आफ्नै भवन छ । तलब सरकारी स्केलको हुन्छ । बीमितको पैसा हामीसँगै सुरक्षित भएको महसूस गर्छाैं । हाम्रो लगानी, खर्च र अनुभव सबैको आधारमा बीमितहरू अझै पनि हामीसँग आकर्षित छन् भन्ने जस्तो लाग्छ ।
निजीक्षेत्रका कम्पनीले गरे जस्तै व्यवसाय बीमा संस्थानले गर्न कति समय लाग्ला ?
हाम्रा बलिया र कमजोर दुवै पक्ष छन् । प्रविधिका कुरा यो वर्ष मात्रै ल्यायौं । बीमा योजना पनि थिएनन् । घातक रोग बीमा योजना ल्याउँदै छौं । हामीले बजारले मागे अनुसारको योजना ल्याउने क्रममा छौं । यो वर्ष दुईओटासम्म नयाँ पोलिसी ल्याऊँ भन्ने हाम्रो योजना हो । बजारअनुसार पोलिसी ल्याउन सक्यौं र अडिटको काम सक्यौं भने हामी निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । मानिसहरू बीमा संस्थान खोजेर आउँछन् । अझै पनि हामी प्रतिस्पर्धी नै छौं । लेखापरीक्षण सिध्याएपछि हामी थप बलियो हुन्छौं ।
५ वर्षपछि कम्पनीको स्वरूप कस्तो हुन्छ ?
अबको ५ वर्षमा हाम्रो लक्ष्य भनेकै पहिलो नम्बरमा हुनु हो । नभए कम्तीमा दोस्रो नम्बरमा त हुन्छौं नै । बीमाको आकार पनि बढ्छ । कम्पनीको चुक्तापूँजी मात्र रू. १० अर्बको हुन्छ । साथै, संस्थानको योजनामा जीवन बीमाको पुनर्बीमा गर्ने योजना छ । शायद ५ वर्षको अवधिमा त्यो पनि पूरा हुनेछ ।
थप ११८ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या १६६४९ पुग्यो[२०७७ असार, २६]
रुरु जलविद्युत् परियोजनाले आईपीओका विक्री गर्न माग्यो बोर्डको अनुमति [२०७७ असार, २६]
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शनिवार पनि कार्यालय खुला राख्न निर्देशन[२०७७ असार, २६]
आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले आईपीओ विक्रीका लागि दियो धितोपत्र बोर्डमा निवेदन [२०७७ असार, २६]
माउण्टेन इनर्जी नेपालले पायो आईपीओ विक्री गर्न बोर्डबाट अनुमति [२०७७ असार, २६]
बढ्दै छ कोषको लगानी[२०७६ चैत, ४]
आज ३०औं वार्षिकोत्सव[२०७६ चैत, ४]
प्रभावकारी बन्दै मोबाइल एप[२०७६ चैत, ४]
उपभोक्ता सचेतना आवश्यक छ[२०७६ चैत, २]